भूकम्पपीडित गाउँमा चुनावी रौनकले छोएको छैन – Etajakhabar
भूकम्पपीडित गाउँमा चुनावी रौनकले छोएको छैन
धादिङ – रुबीभ्याली गाउँपालिकामा यतिखेर चुनावी रौनक छैन । भूकम्पबाट अति प्रभावित सो गाउँका स्थानीयले घर निर्माणमा लागिपरेका कारण त्यहाँ चुनावी रौनकले छोएको छैन । अर्को महिनासम्म घर बनाउनै पर्ने बाध्यताका कारण सिङ्गो गाउँ अहिले घर निर्माणमा लागिपरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिए पनि चुनाव प्रचारप्रसारका लागि दल र त्यसका नेता गाउँ छिर्न सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितको घर निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण र व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदेखाएकाले उनीहरु गाउँ जानसकेका छैनन् । रुबीभ्याली गाउँपालिका–५ चपाङचेतका म्लाङ घले घर निर्माणमा व्यस्त हुनुहुन्छ । पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हुँदा सो गाउँमा बस्न हुँदैन भनेर पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भनेका थिए तर सम्बन्धीत निकायले बस्ती स्थानान्तरणमा चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर उनीहरु त्यही गाउँमै घर बनाउन थालेका छन् । गाउँमाथिबाट पहिरो आइरहेको छ । गाउँ जाने बाटो भूकम्पले क्षति पु¥याएका थिए । पहिरोेका कारण अहिले पनि स्थानीय जोखिमपूर्ण तरिकाबाट चपाङचेत र छुम्राङ जानुपर्छ । घर निर्माणका लागि यो ठाउँ उपयुक्त नभएको भनेर पुनःनिर्माण प्राधिकरणले एकवर्ष अघि नै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर त्यहाँ रहेका ५४ घरपरिवारले त्यही नयाँ घर बनाउन शुरु गरेका छन् ।
गाउँवासीले वैकल्पिक बस्ने व्यवस्थाका लागि जिल्लाका नेतासँग पटक÷पटक आग्रह गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि पटक पटक भेट गरें तर समस्या समाधान हुन सकिएन् । पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले घर नबनाए रकम नदिने सूचना आएपछि अहिले उनीहरु चुनाव छाडेर जोखिम बस्तीमै घर निर्माणमा जुटेका छन् । स्थानीय सरकारले नै यो समस्याको समाधान गर्छ भनेर गाउँवासीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी भएका थिए । तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष काठमाडाँैमा बस्ने र भूकम्पपीडितको समस्या समाधानमा चासो नदिएपछि आक्रोसित बनेका स्थानीयले यतिखेर घरनिर्माणमा व्यस्त भइरहेको स्थानीयवासी अमन तामाङले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउनै लाग्दा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले चुनावी अभियान चलाइरहेका छन् । भूकम्पपीडितको गाउँमा घरदैलो कार्यक्रममा जाने योजना बनाएका नेता गाउँवासी आक्रोसित भएको सूचना पाएपछि लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका नेता सो गाउँमा जानसकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका लागि मंसिर १० गते हुने निर्वाचनमा धादिङको २ नं. क्षेत्रमा १७ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्दा गर्दैछन् । वाम गठबन्धनबाट एमालेका केन्द्रीय सदस्य खेम लोहनी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट काँग्रेसका महासमिति सदस्य दिलमान पाख्रिन प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिएका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा यस क्षेत्रबाट एमालेले विजय हासिल गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धनले मतका हिसाबले अगाडि देखिन्छ । काँग्रेसका उम्मेदवार पाख्रिन काँग्रेसका पुराना नेता दामन पाख्रिनका छोरा हुन । तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्र काँग्रेसले आफू बलियो भएको क्षेत्रको रुपमा लिएकाले विजय हासिल गर्ने जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक २४, २०७४ समय: १५:५६:११
जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुदा १७ को मृत्यु, १३ को अबस्था गम्भीर
बरिष्ठ गायक स्व.अम्बर गुरुंगको पत्नी बिना गुरुङको निधन, पशुपति आर्यघाटमा यसरि गरियो अन्तिम बिदाई (भिडियोसहित)
फिफा रेफ्री संघका सदस्यले नै भने- ‘पेनाल्टी दिनु रेफ्रीको सबै भन्दा ठुलो गल्ति थियो, मलाई सारै अचम्म लाग्यो’ (भिडियो)
यसरी गर्यो कांग्रेसले आजको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध
एयर होस्टेजले आफु बस्दै आएको घरको छतवाट हामफालेर आत्महत्या गरिन (भिडियोसहित)
पहिरोले तीन घर पुरियो, ३४ घर जोखिमा
गोरेले जेलमै मागे सेनाको सुरक्षा, यस्तो छ कारण
क्यान्सरबाट ग्रसित बनेर जीवन मरणसँग लडिरहेकी सोनालीलाई शाहरूख, सलमान जस्ता स्टारले यसो भनेपछि
कार्यक्रममै चपली हाईट नायिका यस्तो पहिरनमा आएपछि हैट तनावमा..भिडियो सहित
यि हुन्- रणबिर कपुरको नेपाली साथी | जस्ले रणबिरलाई नेपालीमा छाडा बोल्न सिकाए (भिडियो सहित)
कविता र उमेश लभ स्टोरी हेर्दा हास्यकलाकारको हलमा रुवाबासी, थमिएन कविता र उमेशको आँसु
रक्सीले मात्तिएकी करिनाले जब पार्टीमा देखाईन् यस्तो चर्तिकला ! पति सैफले सम्हाले यसरी (भिडियो)
क्यान्सर पिडित इरफान खानको हस्पिटलमा यस्तो दयनिय अवस्था, तौल ह्वात्तै घटेका इरफानको यस्तो भिडियो बाहिरियो।(भिडियो सहित)
रुसमा आयोजित विश्वकप फुटबलको समापन समारोहमा पानि परेपछी पुटिनलाई मात्र छाता, पाहुना निथ्रुक्कै